China One Axis Rotator ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
single-axis head-tail positioner သည် header frame ကိုလှည့်ပြီးမောင်းတဲ့ positioner တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဤသည် positioner ကိုရှည်လျားသောအလုပ်အပိုင်းအစများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ဦး ခေါင်းနှင့်အမြီးအကြားအလုပ်စားပွဲပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဂဟေအနေအထားမှာအလုပ်အပိုင်းကိုနေရာချရန်လှည့်နိုင်ပါတယ်။ ဤပုံစံတွင်မြေအောက်ခန်း၊ ဦး ခေါင်းဘောင်၊ အမြီးဘောင်၊ အလုပ်လုပ်စားပွဲ၊ servo motor, RV reducer စသည်တို့ပါဝင်သည်။
positioner mode ဗို့အား insulator တွင်လည်းတန်း အလုပ်လုပ်စားပွဲ အလေးချိန် မင်းလွန်း
HY4030A-250A3phase380V ± 10%၊ 50 / 60HZ F 1800 × 800mm (အထူးပြုလုပ်ထားသောပံ့ပိုးမှု) 450kg 300kg
Q1. standard positioner တွင်ပါ ၀ င်သောအလုပ်လုပ်သောစားပွဲပေါ်မှာရှိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စံအရွယ်အစားမှာ 1800mm × 800mm ဖြစ်သည်။
Q2 ။ ပိုကြီးတဲ့စားပွဲရှိလား
A. ကျွန်ုပ်တို့သည်စားပွဲဝိုင်းကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားလိုအပ်ပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။
Q3 ။ ဘယ်လိုလျှော့ချစက်မျိုးကိုသုံးလဲ။
Q4 ။ positioner တွင်မော်တာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
A.One servo မော်တာပါဝင်သည်။
Q5 ။ positioner အတွက်ထုပ်ပိုးမှုအသုံးအနှုန်းကဘာလဲ။
A. ထုံးစံအတိုင်းသစ်သားသည်ထုပ်ပိုးထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အထုပ်ကိုမသုံးပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုအသုံးမပြုပါက၊
ရှေ့သို့ နှစ်ခုဝင်ရိုး Rotator
နောက်တစ်ခု: စက်ရုပ် HY-1010B-140 ကို တင်၍ ချပါ